Profile Company - xirxirida Pingxiang Baisheng Chemical
Pingxiang Baisheng Chemical xirxirida Co., Ltd waxaa la aasaasay sanadkii 2011 la diiwaan gashan 11,88,000 RMB caasimadda. Baisheng yaal Ceramic Industrial Base, haysta meel ka mid ah 30000m 2, caasimada sheegayaa awoodda sanadlaha RMB 5,000,000.The o warshad this on alaabta dhoobada waa 10,000 tons. Waxaan inta badan xamili dhoobada warshadaha iyo Hannaan.
Waxaan ku tiirsan taageerada farsamo ee Dalian Institute of Chemical Physics, Chinese Academy of Sciences, Shiinaha Group Petroleum Jilin Design Machadka, University Pingxiang iyo machadyada kale ee cilmi sayniska, aasaasay saddex-soo-saarka iyo madal cilmi. Waxaa jira 138 oo shaqaale, 58 ahaayeen in shahaado kulliyad ama ka badan, shaqaalaha farsamada iyo maamulka, oo ka mid ah, oo ah dad titlesin18 farsamo sare. Baisheng sidoo kale muddo dheer kiraystay 10 dhoobada warshadaha ee horumarinta, cilmi-baarista iyo horumarinta khubaro Hannaan iyo Professor shirkadda ee farsamo adviser.Baisheng ayaa oggolaaday 3 shatiyada, 15 utility model shatiyada, waraaqaha xirfadeed daabacay in ka badan 50 articles; helay 2 Sayniska iyo technology abaalmarinta horumarka, 3 sayniska iyo guusha technology qiimaynta; guddoomiyay 1 mashaariicda heer qaran, 10 mashruuc sayniska iyo farsamada ee gobolka, iyo ka qayb qaatay samaynta of 1 Heerka qaran "kubada dhoobada warshadaha kubadaha dhoobada inert" (HG / T 3683.1-2000).
Baisheng ayaa xoogga dhamaystiran of warshadaha dhoobada horumarinta wax soo saarka, design, wax soo saarka iyo rakibidda oo dhan ka mid ah adeega, taas oo soo saari kara dhoobada warshadaha (xirxirida jiingado, kubada dhoobada, kubada dhoobada dalool, saddles dhoobada, leben dhoobada iyo guddiga), bir, caag ah xirxirida munaarad, shaandho kelli (3A, 4A, 5A, 13X taxane), firfircoonaan alumina. Hannaan Environmental soo saari karaan heerkulka hooseeyo Hannaan sari horseed, Hannaan kala daatay ammonia, Methanation catalyst.Ozone Hannaan qayilo iyo Hannaan kale warshadaha kiimikada.
Baisheng ku takhasusay qalabka axdi qarameedka kubada, turxaan dhoobo, wax taaj oo kale, qalajiyo iyo sintering, iyo sare tunnel suunka mesh kiln.The heerkulka sintering noqon kartaa sarraysaa sida 1750 ℃ ​​iyo qiimaha instrumentation ee RMB 7.000.000 ah. waxaan aasaasay R & D xarunta shaqaalaha cilmi-baarista iyo tijaabada gaarka ah, la injineernimada bandhigay digital dhoobada ahaatid xoog compressive, sidaas daraaddeed ololkii photometer, dheelitirka gorfaynta electronic, silicate Halabuurka kiimikada analyzer degdeg ah, DHG Taxanaha kululaynta iyo qallajinta foornada, Fast kululaynta foornada iska caabin ah, Furimaha Dagaalka degdeg ah , daxalka kiimikada qalab imtixaan iska caabin ah, foornada imtixaanka elektaroonik ah, inaad ahaatid abrasion oo kale cilmi-baarista qalabka casriga oo jirrabaya qiimaha methods.the guud ee instrumentation cilmi waa ka badan RMB 5,000,000.
Our tayada gacanta sida ay ISO9001, wax soo saarka yaalla ay si adag imtixaanka by xarunta Imtixaanka, waxyaalaha imtixaanka ka mid ah qayb kiimikada, weecasho size, looga baahan yahay muuqaalka, xoog burburiyo, nuugista biyaha, iska caabin alkali, iska caabin Acid, si lama filaan ah kaamerada resistance.The R & D maaliyad ka badan 600,000 sannad kasta.
Shirkadda Our waa xubnaha network iskaashi oo ka tirsan kooxda China Petroleum, in se aynu nahay alaab-wadeenka ah CHEMCHINA iyo Shiinaha National Dhuxul Group Corp iyo shirkadaha dhoobada warshadaha loogu talagalay by department.we maamulka waa dukaan ah ISO9001 iyo badeecada u helaan aqoon ku shahaadada alaabta center.our Falanqaynta alaabta dhoobada ayaa suuqa caalamiga ah, sida Germany, Japan, Denmark, Russia, America, iibka Iraq.annual RMB6,000,000 gaari karin.